मलेसियामा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा डा महाथिर मोहम्मदको पार्टीले बहुमत हासिल गरेको छ । सत्ताधारी दल बरिसन नेशनल गठबन्धनको ६१ वर्षदेखिको एकातधिकार तोड्दै विपक्षी गठबन्धन शक्तिमा आएको हो। सरकार बनाउन ११२ सिट आवश्यक पर्ने भएपनि विपक्षी गठबन्धनले ११५ सिट जितेको छ।
कुनै दिन उनी पनि बरिसन नेशनल गठबन्धनकै एक सदस्य थिए । उनी वर्तमान प्रधानमन्त्री नाजिव रज्जाकका गुरु समेत थिए । यसअघि सोही गठबन्धनबाट मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए । तर, गठबन्धनले भ्रष्टाचारलार्इ प्रशय दिएपछि सो पार्टीमा रहनु अपमानजनक महशुस गर्नु हो भन्दै पार्टी परित्याग गरेका थिए ।
देशको कार्यकारी प्रमुखमा पुग्ने चिकित्सक केही भएपनि सफल ‘डाक्टर नेता’का रुपमा मलेसियाका डा. महाथिर मोहम्मदलाई कसैले माथ गर्न सक्दैन । सन् १९२५ जुलाई १० मा मलेसियाको एलोर स्टार खेडामा जन्मेका डाक्टर मोहम्मदले गरिबी, अव्यवस्था र अन्योलले आक्रान्त मलेसियालाई अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याएका थिए । बुझ्न सजिलोका लागि तुलना गर्ने हो भने उनले शासन गर्नुअघिको मलेसिया अहिलेको नेपाल भन्दा गरिब थियो । अव्यवस्थित थियो र भ्रष्टाचारले आक्रान्त थियो । हाल ९२ वर्षका डा मोहम्मदले कसरी त्यो मलेसियालाई यो मलेसिया बनाए । किन चिकित्सा छाडेर राजनीतिमा आए ?
सन् १९६९ को संसदिय निर्वाचनमा फेरि उनले हार सहनु पर्‍यो । त्यसबेला आफ्नो पार्टी, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका कारणले उनलाई निर्वाचनमा पराजित गरियो । त्यसै बखत उनलाई पार्टीको सुप्रिम काउन्सिलबाट पनि अल्पमतमा पारी निकालियो । उच्च शिक्षा परिषदको प्रमुखबाट पनि पदमुक्त गरियो । त्यही समय पार्टीबाट पनि निकाल्ने तयारी भयो । उनले सन् १९६९ सेप्ठेम्बर २६ मा पार्टी परित्याग गरे । अव केही समय राजनीतिमा नआउने भन्दै उनले पार्टी छाडे । यही समयमा उनले मलेसियाको विकास कसरी गर्ने भनेर किताब लेखे । ‘द मलाया डिलेमा’ नामक उक्त पुस्तक निकै चर्चित भयो ।
- यो सामग्रीलाई डा प्रकाश बञ्जाडेले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।